खेल र नृत्य हल नृत्य - सुन्दर र उपयोगी खेल
खेल र फिटनेस, एरोविक्स
खेल र नृत्य हल नृत्य - एक अविश्वसनीय सुन्दर कला आधुनिक संसारमा धेरै लोकप्रिय छ कि। र यदि केही वर्ष पहिले पत्ता लगाउन वयस्कहरूको लागि एक नृत्य खण्ड एउटा समस्या थियो, तर आज लगभग हरेक ठूलो फिटनेस सेन्टर यसको आफ्नै प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान गर्दछ। त्यसैले यो खेल के हो? नृत्य गर्न सबै भन्दा राम्रो कहाँ छ? के सफलताको हासिल गर्न सकिन्छ? यी मुद्दाहरू धेरै गर्न चासो हो।
खेल र नृत्य हल नृत्य: यो के हो?
वास्तवमा, एक ढिलो Waltz शास्त्रीय देखि, प्रसिद्ध नृत्य हल नृत्य लुकाउने र एक भावुक र भावनात्मक rumba संग समाप्त कि यस्तो जटिल अवधि अन्तर्गत। आज, खेल र ठूलो मांग मा नृत्य हल नृत्य। सबैलाई नियमित व्यायाम स्वास्थ्य को लागि राम्रो छ भनेर थाह छ। बिहान वा दिनचर्या बल प्रशिक्षण मा जगिंग अन्ततः पट्टाइ लाग्ला सक्छ भने, नृत्य - यो सधैं रोचक छ कि खेल हो। यो केवल एक शारीरिक गतिविधि, तर भावना प्रसारण कला तपाईं आफ्नो शरीर कसरी मास्टर सिक्न गर्न अनुमति दिन्छ कि को पनि पूर्ण छैन।
र तपाईं निर्णय गर्नु अघि आफ्नो अध्ययन सुरु गर्न, यो त्यहाँ मिति मुख्य नृत्य कार्यक्रम दुई हो कि टिप्पण लायक छ।
खेल र नृत्य हल नृत्य युरोपेली कार्यक्रम के हो?
एक - यो कार्यक्रम प्रसिद्ध पाँच नृत्य समावेश ढिलो Waltz, ढिलो foxtrot, टैंगो, विनीज Waltz र quickstep। एक समयमा यी नृत्य ठूलो मनोरञ्जन को तरिका थिए, तर छिटो को आगमन संग, लोकप्रिय क्लासिक प्रजातिहरू बढी ऊर्जावान प्रकारका plummet गर्न सुरु गर्नुहोस्।
तर आज, युरोपेली नृत्य हल नृत्य दोस्रो हावा पायो। यो खेल मा कक्षाहरू आफ्नो मुद्रा सुधार गर्न मद्दत र आन्दोलनहरु थप मनोरम बनाउन सक्छ। साथै, शास्त्रीय नृत्य प्रजातिहरू अलिकति विगत केही वर्ष आधुनिक थिए।
यो ल्याटिन अमेरिकी नृत्य, युरोपेली तुलनामा अत्यन्तै, भावनात्मक भावुक र अधिक जोडदार र स्वैच्छिक कुनै गोप्य छ। यो कार्यक्रम जस्तै चा-चा-चा, jive, साम्बा, पासो doble र rumba रूपमा नृत्य समावेश छ। खैर, यो नृत्य मा लगभग सम्पूर्ण शरीर उत्प्रेरित गर्छ र संगीत को ताल धेरै छिटो छ। यी कक्षाहरू टोन र मांसपेशीमा बलियो र लचीलापन वृद्धि शरीर ल्याउन मद्दत गर्नेछ।
यो घर नृत्य मा संलग्न लायक छ?
हो, घरमा पाठ नाच यसको लाभ छ। सजिलो कसरत लागि सामाग्री फेला - नृत्य कार्यक्रम डिस्क बेचिन्छ, र इन्टरनेट तिनीहरूलाई भरिएको छ। हेर्न र बारम्बार - यो सबै सरल छ जस्तो देखिन्छ। तपाईं क्लब एक सदस्यता भुक्तानी छैन, र आफ्नो सामान्य काम अनुसूची परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन। आखिर, सबैभन्दा दिन को कुनै पनि समय संलग्न गर्न सकिन्छ।
अर्कोतर्फ, त्यहाँ केही कमियां छन्। आखिर, तपाईं अर्को एक अनुभवी पेशेवर, ठीक वा त्यो आन्दोलन गर्न कसरी देखाउन गर्ने हुनेछ। नजिकैको तपाईं जस्तै लक्ष्य भएका र नैतिक समर्थन प्रदान गर्न इच्छुक छन् मानिसहरू हुनेछन्। र, को पाठ्यक्रम, यो छ कि भूल छैन नृत्य जोडी साझेदार आवश्यक छ। र नृत्य हल नृत्य मा प्रतियोगिताको तपाईं प्राप्त गर्न असम्भाव्य हुनुहुन्छ। त्यसैले, तपाईं पैसा र बाहिर संलग्न मौका छ भने - क्लब वा फिटनेस केन्द्र जानुहोस्।
क्लब खेल नृत्य हल नृत्य: समूह कक्षाहरू को लाभ
हरेक ठूलो फिटनेस केन्द्र विशेष नृत्य कार्यक्रम, शरीर आकार दिन र स्वास्थ्य सुधार को मुख्य उद्देश्य छ। साथै, आफ्नो शहर मा पक्कै उपयुक्त स्टूडियो नृत्य हल नृत्य पाउनुहुनेछ।
.. तिमी कोच मदत गर्न यो संग - पहिलो चरण उपयुक्त समूह, उमेर, स्वास्थ्य, आदि रूपमा पाउन छ। खैर, शिक्षक पनि प्रशिक्षण एउटा महत्त्वपूर्ण भाग, आफ्नो क्षमता, ध्यान र assertiveness को कारण अन्तिम परिणाम निर्भर हुनेछ छ।
समूह कक्षाहरू साझेदार संग 4-12 मान्छे, को पाठ्यक्रम एक समूह मा प्रशिक्षण, समावेश गर्नुहोस्। निस्सन्देह, नियमित व्यायाम मात्र शारीरिक स्वास्थ्य समस्याको धेरै समाधान गर्न नयाँ मित्र फेला पार्न र सामाजिक सर्कल विस्तार गर्न मद्दत छैन, तर पनि। के थप चिन्तित व्यक्ति, मलाई खेल र नृत्य हल नृत्य? प्रतियोगिताहरु र तिनीहरूलाई विजेता - यो एउटा उल्लेखनीय प्रेरणा बन्ने र उत्तेजना र इच्छा थप तालिम सुनिश्चित गर्दछ कुरा हो।
यो केवल व्यावसायिक डान्सरहरू टूर्नामेंट भाग गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ। वास्तवमा, आज प्रतियोगिता साईट अवैतनिक देखि प्रशिक्षण विभिन्न स्तर, को मान्छे को लागि आयोजित र वास्तविक पेशावरहरूसँग अन्त्य हुन्छ। निस्सन्देह, यो प्रतियोगिताको लागत थप entail हुनेछ। उदाहरणका लागि, तपाईं एक प्रवेश शुल्क भुक्तानी गर्न आवश्यक हुनेछ। साथै, तपाईंले एउटा राम्रो सुट र यति सस्तो हो छैन जो नृत्य हल नृत्य लागि जूता, आवश्यक हुनेछ। र तपाईं जीत गर्न कटिबद्ध हुनुहुन्छ भने, तपाईंले थप व्यक्तिगत कक्षाहरू लिन हुन सक्छ। तैपनि, प्रतियोगिता, पनि एक अवैतनिक मा विजय, अझै पनि सुखद हुनेछ।
के लुगा रोजगारीका आवश्यक छन्?
को पाठ्यक्रम, खेल र नृत्य हल नृत्य उपयुक्त वस्त्र बिना कल्पना गर्न असम्भव छ। यसबाहेक, यो उनको थियो, र प्रशिक्षण गुणस्तर निर्भर गर्दछ। आखिर, यदि लुगा वा जूता असहज, कदम धेरै गाह्रो र कहिलेकाहीं खतरनाक हुन्छ।
प्रशिक्षण "outfit" को खरीद शुरू, सायद, यो एक जुत्ता छ। आखिर, यो तल्ला मा डान्सरहरू एडी संग जूता खडा कुनै गोप्य छ। र यहाँ आकस्मिक जूता काम छैन - नृत्य गर्ने प्रयास साधारण जूता मा एक मजबूत stretching वा dislocation परिणाम हुन सक्छ। तपाईं ल्याटिन अमेरिकी कार्यक्रम को लागि के गर्न जाँदैछन् भने, सजिलो झुकन एकमात्र संग चप्पल चयन र छोटो instep। तर क्लासिक नृत्य हल नृत्य लागि जूता राम्रो औंला र एडी तय गर्नुपर्छ। यस्तो जूता विशेषता स्टोर मा खरिद गर्न सकिन्छ। तर तपाईं को आवश्यकता छैन गर्न - र अवैतनिक प्रशिक्षण लागि उपयुक्त सहज जूता।
प्रशिक्षण लुगा लागि जाँदा, त्यहाँ एक एकल नियम छ - यो सहज हुनुपर्छ। त्यसैले लोचदार चड्डी वा नृत्य गर्न सबै भन्दा राम्रो छ sweatpants। खैर, केही महिला विशेष प्रशिक्षण कपडे खरीद गर्न रुचाउँदैनन्।
तपाईं प्रतियोगिता नृत्य हल नृत्य जाँदैछन् भने सुन्दर लुगा मात्र मामला आवश्यक हुनेछ। आखिर, यहाँ न्यायाधीश छुट्टाछुट्टै मात्र कौशल मूल्यांकन, तर पनि डान्सरहरू आउटफिट। एउटा ठीक आकारको सुट, तपाईं नृत्य को एक अनुरूप छवि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं युरोपेली निर्देशन अध्ययन भने, पोशाक कोड सख्त छ - महिला कुहिनो एउटा संकुचित कमर र पन्जा लामो कपडे देखा, र मानिसहरू गाढा tuxedos मा नृत्य।
तर यी नृत्य सधैं भावुक र चुनौतीपूर्ण छन् किनकी, ल्याटिन अमेरिकी शैली थप निःशुल्क आवश्यकताहरु - तंग छोटो कपडे मा ढाकिएको एक महिला र पुरुष विशेष शरीर र सुरुवाल देखा।
खेल र वजन बलरूम नृत्य - यो प्रभावकारी छ?
आजको संसारमा वजन धेरै तरिका छन्। र नृत्य खेल प्रशिक्षण किनभने, त्यसपछि, को पाठ्यक्रम, तिनीहरूले आंकडा सुधार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। साँच्चै, नृत्य कक्षाहरु जीव समयमा ऊर्जा को एक विशाल राशि बिताउनुहुन्छ।
साथै, नृत्य, अतिरिक्त सेन्टिमिटर हटाउने र, साथै छाला कस र शरीर टोन दिने, आफ्नो खुट्टा मांसपेशीमा, हतियार, एब्स बलियो र फिर्ता। निस्सन्देह, छोटो समयमा अतिरिक्त वजन को छुटकारा प्राप्त गर्न, गहन प्रशिक्षण आवश्यक छ। विशेषज्ञहरु आधा एक घण्टा संलग्न गर्न एक हप्ता 3-4 पटक सुझाव दिन्छौं। र बिजुली आपूर्ति प्रणाली समायोजन गर्नुपर्छ। शरीर प्रशिक्षण लागि ऊर्जा र प्रयास आवश्यक छ किनभने सख्त आहार, यो मामला मा contraindicated छन्। तर यहाँ सीमित हुनु पर्दछ बोसो र कार्बोहाइड्रेट (चीनी) को मात्रा हो।
लाभ र खेल नृत्य को हानि
वास्तवमा, खेल र नृत्य हल नृत्य मदत धेरै समस्या समाधान गर्न सक्छौं - शारीरिक र मनोवैज्ञानिक दुवै। सुरु लागि यो नियमित व्यायाम मांसपेशीमा, वृद्धि धीरज र बल थप्न बलियो टिप्पण लायक छ। साथै, नृत्य एरोविक्स को हृदय प्रणाली बलियो बनाउँछ। नृत्य संग, तपाईं मेरुदण्ड विभिन्न झुकाव सहित धेरै समस्या, को हटाउनु, आफ्नो मुद्रा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, मांसपेशीमा थप लचिलो र मनोरम आन्दोलन बनाउन। र, को पाठ्यक्रम, नृत्य - यो मूड सुधार जो, आत्म-सम्मान बढ्छ र तपाईं नृत्य तल्ला मा एक तारा बनाउँछ सुन्दर र रमाइलो सोख छ।
को चोट लागि, यो निश्चित छ। घाइते, sprains, संयुक्त विरूपण - यो थकित नियमित व्यायामको के सक्छ छ। अर्कोतर्फ, यी "साइड इफेक्ट" नियमित नृत्य हल नृत्य मा प्रतियोगिताहरु उपस्थित र पेसा निर्माण जिम मा काम bezvylazno गर्ने व्यावसायिक डान्सरहरू धेरै साधारण छन्। तर एक अनुभवी कोच को पर्यवेक्षण अन्तर्गत अवैतनिक प्रशिक्षण मात्र पहिलो केही हप्ता मा मांसपेशिहरु मा मात्र दुखाइ धम्की, र त्यसपछि।
त्यहाँ अभ्यास गर्न कुनै पनि contraindications हुनुहुन्छ?
निस्सन्देह, बल अन्तर्गत खेल र नृत्य हल नृत्य छैन सबैका लागि हो। र, हो, केही contraindications छन्। विशेष मा, एक वर्ग मान्छे सर्जरी वा गम्भीर चोट देखि उदीयमान पक्राउ गर्न सकिँदैन। लागि सापेक्ष contraindications कुनै पनि पुरानो रोग, साथै हृदय को उल्लंघन र circulatory प्रणाली, जोडहरुको को रोगहरु समावेश गर्नुहोस्।
तर यी contraindications यो काम अझै सम्भव भएदेखि, नातेदार भनिन्छ। उदाहरणका लागि, नृत्य हल नृत्य मा लगे पनि वृद्ध, तर यहाँ सही अनुज्ञेय लोड को स्तर निर्धारण गर्न आवश्यक छ, र वर्गहरू मात्र कोच अनुभव गर्न सकिन्छ पकड। खैर, प्रशिक्षण कुनै पनि भडकाऊ र संक्रामक रोगहरु समयमा सौतेली गर्नुपर्छ - यो मामला मा यो एक पूर्ण रिकभरी लागि प्रतीक्षा गर्न राम्रो छ।
वजन लागि नृत्य एरोविक्स (समीक्षा)
के एरोविक्स प्रशिक्षक तपाईं बताउन हुनेछ?
एक somersault कसरी बनाउने?
ट्रयापिज अभ्यास लागि - यो सजिलो छ
यहाँ रेकर्ड छ: 40 वर्षीया व्यायाम गर्ने व्यक्ति रियो मा ओलम्पिक जाँदै छ
महिला र जोडी स्केटिङ एक आवश्यक तत्व। प्रजाति र सुविधाहरू
यो श्रृंखला "डरलाग्दा कहानिहरु": चलचित्र दर्जा को समीक्षा
विस्तृत ब्रीम लागि मत्स्य पालन
नर्वेजियन एयर शटल ( «नर्वेजियन एयरलाइन्स"): उडानहरू सबैलाई उपलब्ध छन्
उद्यम व्यवस्थापन संरचना
आफ्नो हातले उज्ज्वल र सुन्दर सजावट फूल कपडा
द्वारा पूछे जाने रोटी नुस्खा सर्वश्रेष्ठ सलाद: सबै अवसरका लागि खाजा
Semenova Ekaterina Leonidovna गायक: जीवनी
एक लामो, दुई छोटो संकेत BIOS - यो संयोजन कुरा छ?
काम विवरण लाइब्रेरियन। कर्तव्य र लाइब्रेरियन को अधिकार
पहाड फूल: नाम र विशेषताहरु
Cranberries संग Sauerkraut। दुई embodiments मा नुस्खा भिटामिन खाजा,